Qarax ka dhacay Mandera & labo la fashiliyey iyo Cali Roba oo yiri “Amaanku waa xumaaday” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qarax ka dhacay Mandera & labo la fashiliyey iyo Cali Roba oo yiri “Amaanku waa xumaaday”
17th March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Amaanka magaalada Mandera ee ku taalla soohdinta Soomaaliya iyo Kenya ayaa maankeeda laga deyrinayaa.
Bam ayaa ku qarxay saaka magaalada Mandhera ee dalka Kenya kahor inta aysan ciidamada Booliska kala furfuran labo kale.
Qarxa ayaa ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan halka loo yaqaano Point 3, laakin qaraxaas ma geysan wax dhibaato ah.
Booliska magaalada Mandera ayaa galabta mar kale helay labo miino oo dhulka lagu aasay, si waxyeelo kale loogu geysto.
“Qarax ayaa ka dhacay Border Point 3 balse wax dhaawac ah ma geysan” sidaas waxaa yiri Mr Elvis Korir oo ah guddoomiye ku xigeenka dhinaca Bari ee magaalada Mandera.
“Booliska waxa heleen labo miino oo nooca dhulka la geliyo ah waxayna ku guuleysteen inay kala furfuraan” ayuu yiri Elvis.
Mr Korir ayaa sheegay in miinooyinka la geliyay halkaas habeenimadii ayna ka dambeeyaan dad uu ku tilmaamay inay ka soo gudbeen xadka Soomaaliya iyo Kena gaar ahaan magaalada Bulo Xawo.
“Halka la geliyay waxyaalaha qarxa waxaa isticmaala ciidamadeena ilaaliya xadka waxayna u muuqataa in yoolka uu ahaa ciidamada ilaalada xadka” ayuu yiri Mr Korir.
Dhanka kale, guddoomiyaha deegaanka Mandera Cali Ibraahim Robaoo dhawaan ka badbaaday weerar la doonayo in lagu qaarijiyo ayaa sheegay in uu faraha kasii baxayo ammaanka dalka Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari, kadib markii ay kordheen weerarada Alshabaab.
Masuulkan ayaa ku dhaliilay madaxda Kenya in ay ka gaabiyeen sugidda amniga dalka, isagoo xusay in hadii aan si deg deg ah wax looga qaban falalka amni darro ee ay Shabaab ka geeysanayaan gudaha Kenya in xaaladdu ay kasii dari doonto.
“Dowladda ayaa ka masuul ah in ay ilaaliso dalka oo dhan, looma baahno in ay Soomaaliya ciidamo ka joogaan si ay u ilaaliyaan Soomaalida, halkii ay ka ilaalin lahaayeen shacabka Kenya,” ayuu masuulkan hadalkiisii raaciyay.
Jimcadii aynu kasoo gudubnay ayay ahayd markii ay Al-shabaab weerar ku qaaday gaadiid uu la socday gudoomiyaha gobolka Mandheera Cali Roba, weerarkaa oo ay ku dhinteen sedex ruux oo labo kamid ah ay ahaayeen askar ka tirsanayd ciidamada booliska Kenya.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab oo koox koox u socda ay ku wareegayaan deegaanada ku dhow-dhow xuduudda, si buu yiri ay uga geystaan falal liddi ku ah ammaanka, isagoo sheegay in loo baahanyahay ciidamo dhulka ah oo kula dagaalama howdka.
Muungaab iyo Kay oo wadahadal ka yeeshay doorashada Dowladda Hoose ee Muqdisho
Wasiirka Waxbarashada dowladda federaalka oo booqatay Galmudug